Iimenyu eziSetyhula kwiCSS: 11 iintlobo ezifanelekileyo zokwenza iwebhusayithi yakho elandelayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iimenyu ezili-11 zetyhula kwi-CSS nakwi-HTML ukulandela imigangatho yangoku yoyilo lwewebhu
Siqhubeka nenye Uluhlu olukhulu lweemenyu ezijikelezayo zombini kwi-CSS njengakwi-HTML ukuze ukwazi ukuziqhelanisa neemfuno zewebhusayithi yakho. Ezi menyu zetyhula ikakhulu zama ukunika imenyu yehamburger isitayile kunye noopopayi abajikeleza isetyhula; kanye njengokuba kungenakuba njalo.
Kukho iindidi ezahluka-hlukeneyo kunye nokugqibelele oko kukuthi Uyakwazi ukunika ingqwalaselo eyimfuneko kumxholo othile. Oopopayi kunye nesitayile esibonwayo esincinci bayakwazi ukunika imiqondiso undwendwe ukuze bazi ukuba sineliso elilungileyo ukunika umgangatho wewebhusayithi yethu kuyilo lwewebhu. Masenze ngeemenyu ezili-11 ezijikelezayo, ngaphandle kokuqala sizithintele ekunxibelelaneni kolunye uluhlu lweemenyu zeCSS.
1 ISETYHULA menu navigation
2 Imenyu ejikelezayo ejikelezayo
3 ISetyhula bar yokukhangela
4 ISetyhula yemenyu yezixhobo
6 Imenyu yobubanzi kwiCSS
7 Imenyu yeradial
8 Imenyu ye-CSS Gooey
9 Imenyu ye-animated radial
10 ISetyhula popout popout
11 Imenyu ejikelezayo ejikelezayo
ISETYHULA menu navigation
Le menyu yokujikeleza isetyhula iyafumaneka kwi-CSS nakwi-HTML, ke ukuphunyezwa kwayo kulula kakhulu ukuba uqhele ukusebenza nekhowudi. Unikwe oopopayi abakhulu kunye nesitayile esincinci ebeka phakathi kwezona zilungileyo kuluhlu.
Imenyu ejikelezayo ejikelezayo
ISetyhula bar yokukhangela
Le bar isetyhula iphefumlelwe Ulwimi loyilo lukaGoogle olubizwa ngokuba luYilo lwezixhobo. Ukuba ujonga olunye olo lwimi, sele kuthabatha ixesha ukuyidibanisa kwiwebhusayithi yakho.
ISetyhula yemenyu yezixhobo
Enye imenyu ejikelezayo yoYilo lweMathiriyeli kwaye leyo ime ngaphandle kwabanye Kolo ngcelele lweempawu ezibonakalayo ezithe nkqo. Ukuqhayisa kunye nokugqiba okugqibeleleyo; ayilunganga, kodwa ijongeka intle.
Le menyu ixhotyiswe ngoopopayi abathi Yandisa iqhosha lehamburger ukubonisa amacandelo ahlukeneyo onokuya kuwo kwiwebhusayithi apho idityanisiwe.
Imenyu yobubanzi kwiCSS
Le menyu ye-radial yenziwa kwi-CSS nakwi-HTML. Yi imenyu setyhula ebonakalayo kakhulu kolo thotho lwemifanekiso ezibonakala xa ucofa i icon yehambhega. Ukwahlula ngokwalo kuphela kuloo nto.
Enye yeemenyu zesetyhula zokuyila ezikuluhlu, ezibonakaliswa ngu oopopayi basebenze kakuhle. Akunakuze ucofe ukubona amacandelo emenyu kwiwebhusayithi yakho.
Imenyu ye-CSS Gooey
Le menyu ithobela olo hlobo loopopayi ebizwa ngokuba yiGooey eyenza amacandelo ahlukeneyo ukuhamba kwiqhosha le hamburger. Imenyu ejikelezayo eyahlukileyo kwezinye kwi-CSS, ke ngoko ukulungele ukuyidibanisa kwiwebhusayithi. Oopopayi abadlamkileyo nabatsala amehlo yile nto ibenza bahluke kwabanye.
Imenyu ye-animated radial
ISetyhula popout popout
Umshicileli omfutshane kwi icon yehamburger uvula ngokupheleleyo amacandelo ahlukeneyo ukwandisa isangqa kwaye ukwazi ukucofa nganye nganye. Inesiphumo sokuhamba ngokungagungqiyo ukuba ubambe imouse kuyo nayiphi na kuzo, ke iba yinto enomdla ngakumbi kunangaphambili, esisiseko ngakumbi.
Le yenye yezona setyhula ziyimvelaphi kunye nobuchule kuluhlu lonke. Ngaba Yenza ngokwezifiso kwaye iya kukukhumbuza ngefowuni yabadala ukuba kufuneka sijike umnwe ukwenza umnxeba ngenani ngalinye. Oopopayi abonwabileyo kwimenyu ejikelezayo ebonakalayo kwabanye xa ukhawula. Ngokwenyani luphiliso olufezekisa konke oku, ke ukuba ujonge imenyu emnandi nenomdla kumxholo othile, njengeziko lokutsalela umnxeba, oku kuyifanele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Bugcisa » CSS » Iimenyu ezili-11 zetyhula kwi-CSS nakwi-HTML ukulandela imigangatho yangoku yoyilo lwewebhu
Mkhulu, enkosi ngokufaka kunye neekhowudi zakho. Enkosi kakhulu. Eli phepha lewebhu liya ngqo kwibar yam yeebhukumaki.
Ithala leencwadi laseNew York lenza kube lula ukukhuphela imifanekiso yalo engaphezulu kwe-180.000